FAMPIVOARANA NY TOEKARENA : Vonona hanolo-tanana i Inde sy Pologne, atao fitaratra aty Afrika i Madagasikara
Tafiditra ao anatin’ny vina Iem, tanterahin’ny Filoha Andry Rajoelina ny fanamafisana orina ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena vahiny ho fikatsahaha hatrany ny hanatevenana ny fampandrosoana haingana an’i Madagasikara ary koa hanatrarana ny fahatarana ara-toekarena nandritra izay 50 taona mahery nahazoana ny fahaleovantena izay. 16 mai 2019
Napetrany ny fanamby fa fifanaraham-piaraha-miasa “samy mahazo tombony” no apetraka amin’ireo firenena miara-miasa amin’i Madagasikara mba ho fitsinjovana mandrakariva ny tombotsoan’ny vahoaka Malagasy.
Andriamatoa Abhay Kumar no voatendry ho masoivoho vaovaon’i Inde hiasa sy honina eto Madagasikara raha toa ka Andriamatoa Jacek Bazanski kosa ny an’i Pologne. Vonona hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampivoarana ara-toekarena an’i Madagasikara, hampiroborobo sy hampitombo ny fampiasam-bola ary ny fifanankalozana ara-barotra amin’i Madagasikara i Pologne. I Inde kosa dia vonona hanitatra ny fiaraha-miasa efa nisy ary vonona toy izany koa hampitombo isa ireo Malagasy nisitraka izany. Ireo no isan’ny nivoitra, raha nanolotra ny taratasy nanendry azy avy tamin’ny Filohan’ny repoblika Andry Rajoelina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izy ireo, omaly maraina.
Raha i Inde manokana no asiana resaka dia sehatra maro no efa niarahany niasa tamin’ny firenena Malagasy. Ohatra amin’izany ny fametrahana ilay milina fanaovana “Rediotherapies” izay azo itsaboana olona voan’ny “homamiadana”. Ankoatra izay dia nambaran’andriamatoa Abhay Kumar, masoivoho vaovaon’i Inde ihany koa fa hisy ny injeniera, manam-pahaizana manokana avy any Inde ho tonga eto Madagasikara amin’ity volana mey ity hanofana ireo mpitsabo Malagasy eo amin’io sehatra io.
Vinavinaina hahatratra 600 eo ho eo fara-fahakeliny ny Malagasy hofanina amin’io sehatra io hatramin’ny faran’ny taona. Eo amin’ny lafiny ara-toekarena kosa dia vonona hizara traikefa mahakasika ny fambolem-bary eto Madagasikara ihany koa i Inde ary efa eto an-toerana amin’izao ny mpahay siantsa Indiana hijery ny velaran-tany azo hampiharana izany. Tanjona tratrarina amin’izany ny fampitomboana sy fanitarana ny velaran-tany hamokaram-bary ka ny minisiteran’ny fambolena no hiara-hiasa akaiky aminy amin’ny famokarana zezika. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa ny firenena Indianina dia isan’ireo firenena mpanome vatsim-pianarana betsaka indrindra ny mpianatra avy eto Madagasikara ary 100 isan-taona fara-fahakeliny ny mpianatra Malagasy misitraka izany isan-taona. Nanamafy, omaly, ny ambasadaora vaovao fa hitombo sy hiitatra ny mahakasika io fanampiana ny mpianatra Malagasy io ary nambarany ihany koa fa zava-dehibe ho azy ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana amin’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy hanamafisana orina ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin’izay.
Hanitatra ny fiaraha-miasa i Pologne
Ho an’i Pologne kosa dia nanambara ny masoivoho vaovao, Jacek Bazanski fa efa misy ny fifanankalozana ara-barotra eo amin’ny Pologne sy i Madagasikara ka ny fanondranana vokatra lavanila mankany Pologne no tena isehoan’izany. Na izany aza, nanipika ity farany fa mbola kely io vokatra lavanila aondran’i Madagasikara io no sady tsy mbola mandeha mivantana any Pologne fa elanelanin’ny firenen-kafa. Naneho ny fahavononany araka izany ity masoivoho vaovao ity ary nanambara fa azo itarina sy ampitomboina tsara izany mba hampiroboroboana ny fifanankalozana sy ny fampiasam-bola eo amin’ny firenena roa tonta. Nambarany ihany koa fa azo itarina amin’ny fanondranana vokatra hafa ankoatra ny lavanila ny fanondranana ary rariany ny tsy hisian’ny firenena hafa mpanelanelana. Navoitran’ny Filohan’n’ny repoblika, Andry Rajoelina nandritra ny fandraisana ity ambasadaoron’i Pologne ity ihany koa fa ao anatin’ny vina Iem napetrany ny hametrahana an’i Madagasikara ho fitaratra ara-toekarena aty amin’ny ranomasimbe Indiana sy aty Afrika ka afaka manohana tsara ny fanatanterahana izany i Pologne.